Mianara mampiasa fitaovana 3D an'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Mianara mampiasa fitaovana 3D an'ny Photoshop
Fantatrao ve fa afaka mamorona Zavatra 3d miaraka amin'ny fitaovana famolavolana sary? Amin'ny Photoshop dia mamela anao hanao fahagagana haingana, mora ary tsy manana fahalalana avo momba ilay fitaovana.
Manome anao tranga azo ampiharina izahay mba hahafantaranao ny fampiasana fototra ny fitaovana sy izay rehetra azo atao. Raha izany dia, hamorona baolina eran-tany isika afaka roa minitra fotsiny.
1 Asaivo ilay fitaovana
2 Ampiharo ny harato
3 Zavatra 3D
4 Fananan'ny sarintany 3D anay
manana ny fitaovana
Ny fitaovana izay ilaintsika dia ho sary, amin'ity tranga ity, sarintanin'izao tontolo izao amin'ny endrika png, izany hoe, tsy misy ambadika. Raha vantany vao ananantsika ny rakitra dia hosokafantsika izy ary hofidinay ny sosonao. Ny fomba haingana indrindra dia amin'ny alàlan'ny fitaovana "fifantenana haingana". Ny kinova vaovao an'ny programa dia ahafahantsika misafidy mora foana sy tonga lafatra ny sosony misy ilay bokotra izay hita eo an-tampon'ny menio: Misafidiana ary asio sarontava.
Ampiharo ny harato
Ny dingana manaraka arahinao, ny fanananao ny fisie no ho voafantina mamorona ny harato, izany hoe ny vokany 3D. Tokony hanaraka ny lalana manaraka, araka ny asehontsika amin'ny sary:
New Mesh avy amin'ny Layer - Mesh Preset - Sphere.
Ny vokatry ny a baolina eran-tany ho azy.
Rehefa mamorona ilay zavatra 3D dia hiseho ny varavarankely izay ahafahantsika manapa-kevitra izany fomba fijery te-hahita amin'ny sehatra isika. Ho fanampin'izay, amin'ny totozy azontsika atao ahodino ilay zavatra ary jereo ny endrik'izy ireo amin'ny toerana tadiavinay.
Fananan'ny sarintany 3D anay
Mba hanomezana azy famaranana manokana dia azontsika atao ny manova ny sosona fananana. Ohatra, manapa-kevitra ny loko ambadiky ny sehatra. Raha asehontsika amin'ny sary dia azo atao izany apetaho ny loko irina miaraka amin'ny mpisafidy loko izay miseho eo amin'ny menio ilany.
Ho fanampin'izany, tsy maintsy tadidintsika fa, raha te hampihatra an'io zavatra io amin'ny fototra izay tsy fisaka isika, ohatra, dia mamorona fanesoana ny fahitana azy ao amin'ny efitrano iray, dia tsy maintsy dinihintsika ny jiro. Miankina amin'izany, ny aloky ny sehatra dia tokony ampiharina amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa. Amin'ity tranga ity dia nanampy ny farany ambany izahay.
Raha afaka nandinika ianao dia tsotra be ny manao sy matihanina ny valiny ary tena manampy amin'ny tetikasa sary hafa.
Mamorona ny zavatra 3D ao anatin'ny roa minitra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mianara mampiasa fitaovana 3D an'ny Photoshop
Ho faty ny mpampanonta sary Aperture an'i Apple
Hatsarao ny famolavolana ny lahatsoratrao sy ny fipetrahana amin'ny WordPress miaraka amin'ny Shorcodes Ultimate